ငါးလေးတွေ ဌက်လေးတွေ လွှတ်ရင်းနှစ်သစ်ကုသိုလ် ပြုခဲ့တဲ့ ရှာရှာ
နှစ်သစ်မှာ ဌက် လွှတ်ရင်း ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေး သတိရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
18 Apr 2018 . 11:42 AM
နှစ်သစ်မှာ ဘုရားသွားပြီးတော့ ငါလည်းလွှတ်တယ် ၊ ဌက်လည်း လွှတ်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်ပက်ထရစ်ရှာ(စူးရှနိုင်) က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဌက်ကလေးတွေ လွှတ်တော့ ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးကို လည်း အခုလိုရေးသားထားပါသေးတယ်။
“ရှာရှာငယ်ငယ်ကလေ…ငှက်ကလေးတွေလွှတ်တုန်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကရှာရှာ့လက်ကိုဆိတ်ဆွဲပလိုက်တာ အမလေး! အီစိမ့်သွားတာပဲ! ကြောက်ပါကြောက်သွားတာ အခုအချိန်အထိငှက်ကလေးတွေလွှတ်တဲ့အခါတိုင်းကြောက်စိတ်ကနည်းနည်းဝင်နေတုန်းပဲ 😅” ဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ဌက်ကလေးတွေကို လွှတ်ပေးပေမယ့် ကြောက်စိတ်လေးက ဝင်နေတုန်းပဲ ဆိုတာကို အခုလိုဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်ပက်ထရစ်ရှာ (စူးရှနိုင်) ပါဝင်တဲ့ Reflection (ရောင်ပြန်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဆိုရင် လည်း မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit:Patricia Facebook
နှဈသဈမှာ ဌကျ လှတျရငျး ငယျငယျက အကွောငျးလေး သတိရခဲ့တယျဆိုတဲ့ ပကျထရဈရှာ
နှဈသဈမှာ ဘုရားသှားပွီးတော့ ငါလညျးလှတျတယျ ၊ ဌကျလညျး လှတျခဲ့တယျ ဆိုပွီး မျောဒယျ သရုပျဆောငျပကျထရဈရှာ(စူးရှနိုငျ) က သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာဖျောပွထားပါတယျ။ ဌကျကလေးတှေ လှတျတော့ ငယျငယျက အကွောငျးလေးကို လညျး အခုလိုရေးသားထားပါသေးတယျ။
“ရှာရှာငယျငယျကလေ…ငှကျကလေးတှလှေတျတုနျးငှကျကလေးတဈကောငျကရှာရှာ့လကျကိုဆိတျဆှဲပလိုကျတာ အမလေး! အီစိမျ့သှားတာပဲ! ကွောကျပါကွောကျသှားတာ အခုအခြိနျအထိငှကျကလေးတှလှေတျတဲ့အခါတိုငျးကွောကျစိတျကနညျးနညျးဝငျနတေုနျးပဲ 😅” ဆိုပွီးတော့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ဌကျကလေးတှကေို လှတျပေးပမေယျ့ ကွောကျစိတျလေးက ဝငျနတေုနျးပဲ ဆိုတာကို အခုလိုဖျောပွထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။
မျောဒယျသရုပျဆောငျပကျထရဈရှာ (စူးရှနိုငျ) ပါဝငျတဲ့ Reflection (ရောငျပွနျ) ရုပျရှငျဇာတျကားဟာဆိုရငျ လညျး မွနျမာနှဈဆနျးတဈရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသနပွေီဖွဈပါတယျ။